Fikarohana momba ny firaisana Ny Lehilahy Missile Indianina: Ny Tranom-pitaovam-piarovana ny Tipu Sultan | Abdul Kalam miaraka amin'ny raharaha Reincarnation an'ny Haider Ali | Vikram Sarabhai sy ny fiainan'i Pastor Mysore tamin'ny Wernher von Braun - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Ny fiainana ara-panahy sy siantifika an'i Abdul Kalam
Abdul Kalam dia heverina ho rain'ny programa balafomanga Indiana ary toy izany, matetika izy no antsoina hoe ilay "Missile Man." Vikram Sarabhai ary, amin'ny fankasitrahana, dia toerana antsoina hoe Vikram Sarabhai Space Center ny Orinasa lehibe indrindra ao amin'ny Orinasa mpikaroka momba ny tontolo iainana. Andeha isika hianatra momba ireo mpitarika roa amin'ny fikarohana rocket Indiana.
APJ Abdul Kalam dia lehibe tao amin'ny kaominin'i Nosy Madras Rameswaram any atsimon'i Inde. Amin'ny maha-zazalahy azy dia handeha ho any am-piandohan'ny andro izy sy Jallaludin namany akaiky, miresaka momba an'Andriamanitra sy ny zavatra ara-panahy. Na dia nanangana silamo aza i Abdul, dia nitsidika ny tempolin'i Hindu izy sy i Rameswaram Tompo Shiva. Amin'ny fombafomba dia nandeha nanodidina ny tempoly tamim-panetrentena izy ireo ary toy ny nataony, Jalludin sy Abdul "nahatsapa hery mandalo" tamin'ny alalan'izy ireo. (1)
Taoriana kely teo amin'ny fiainana, rehefa nitsidika ny Sivananda Ashram teo akaikin'ny reniranon'i Ganges, dia namaritra ny "fahatsapana hafanam-po lalina" i Abdul rehefa niditra ny ashram. (2) In-dingana iray hafa, namelabelatra ny zava-niseho iray izay nandaharan'ny rainy tamin'ny fandevenana ny moske iray mba hankalaza ny fandrosoana amin'ny asany: "Afaka mahatsapa ny herin'Andriamanitra izay mirotsaka ao amin'ny faritra iray amin'ny alalan'ity raiko ity aho ary miverina any amin'ny Andriamanitra; Isika rehetra dia teo ambanin'ny fofon'ilay vavaka. "(3)
Ny fahatsapana ny ara-panahy dia tsy nandao an'i APJ Kalam na oviana na oviana ary tsy nahita ny siansa sy ny fifandraisany ara-panahy ho toy ny mahaliana. Raha ny marina, nilaza i Kalam fa ny siansa dia efa lalandava ho an'ny fampandrosoana ara-panahy sy ny fanatanterahana ny tena. "(4)
Ankoatr'izay, ny afo Shiva, ilay transformer, dia toa mamakivaky ny lalany. Ny afo dia manan-danja amin'ny asa soratr'i APJ Abdul Kalam. Ny autobiography dia nahazoan-dalana, Wings of Fire, ary boky hafa nosoratany no nantsoina, Toe-tsaina, izay manondro ireo ankizy ao India ary ny tanjony tsy maintsy ataony India ho firenena matanjaka sy mandroso.
Abdul Kalam dia manana fientanentanana ho an'ny sidina
Amin'ny maha-zazalahy azy dia nanonofy ny hanidina i Abdul, ary tahaka an'i Leonardo da Vinci dia nianatra ny sidina vorona izy. Taty aoriana, teo amin'ny fiainana, fony tanora i Abdul dia niditra tao amin'ny Madras Institute for Technology (MIT) mba ho lasa injeniera. Eto koa, dia nanamarika fialamboly ho an'ny milina manidina izy. Ao amin'ny autobiography izy dia mamaritra ny fiderany ny fiaramanidina sy ny rafitra nataony tao amin'ny MIT. Nanoratra izy hoe: "Nahatsapa hafanam-po hafahafa ho azy ireo aho, ary nijanona teo akaikin'izy ireo taty aoriana raha nody tany amin'ny trano fandraisam-bahiny ny mpianatra hafa, nankasitraka ny sitrapon'ilay lehilahy hanidina an-danitra toy ny vorona." (5)
Raha ny marina, ny faniriana lehibe indrindra sy ny fanirian'i Kalam tamin'izany fotoana dia ny ho lasa manamboninahitra ao amin'ny tafika an-dranomandry Indiana. Kalam dia nandeha namakivaky ny fizotry ny fangatahana ary fahadisoam-panantenana nahatsiravina azy izany rehefa nolavin'ny Air Force Selection Board izy, tsy nahitana fotsiny ny fetezana ho lasa flyer.
Na dia nosakanana aza ny nofinofy ho lasa mpanamory fiaramanidina, dia naka toerana niaraka tamin'ny Minisiteran'ny Fiarovana i APJ Abdul Kalam, ary lasa mpanampy siantifika ambony ho an'ny Direktoratin'ny fampandrosoana teknika sy ny famokarana (DTD & P). Tsy fiaramanidina manidina i Kalam, fa handray anjara amin'ny famolavolana azy ireo. Tao amin'ny tetikasa iray, Kalam dia nitarika ekipa iray izay namolavola fiaramanidina ady ary i Abdul dia nanidina tamin'ity hevitra ity na dia santimetatra vitsivitsy monja aza. Ny dingana manaraka nivoarany dia ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Profesora Vikram Sarabhai, satria ny Komity India ho an'ny Fikarohana momba ny habakabaka dia liana amin'ny fandraisana an'i Kalam ho an'ny toeran'ny "injenieran'ny Rocket."
Abdul Kalam sy Vikram Sarabhai dia maneho ny fahatsapana voajanahary
Nisy fifandraisana mivantana teo amin'i Kalam sy Sarabhai. Kalam dia nanaitra ny hafanana sy ny fahatsapana ao amin'i Sarabhai, ny fahatsapana fanantenana sy ny fahitana. Sarabhai, Kalam dia nanamarika tamin'ny vanim-potoana, dia mpandova, mpandinika ary mpitarika izay nanentana ireo olona teo ambaniny tamin'ny fanehoana finoana sy fahatokiana fa hahomby. Manolo-kevitra ny fifanakalozan-kevitra izay namolavola vahaolana ho an'ny olan'ny olom-bitsy.
Ny tononkalo izay nanoratan'i Kalam an'i Vikram Sarabhai dia nanambara fa nandritra ny taona maro dia naneho fitiavana sy fankasitrahana lalina i Abdul, mihoatra noho ny an'ny mpiara-miasa hafa rehetra. Tena nalahelo mafy izy raha vantany vao maty tamin'ny Vikram Sarabhai i Vikram Sarabhai, tamin'ny taona 52, fony izy niasa be. Kalam tatỳ aoriana dia nanondro an'i Vikram Sarabhai ho Mahatma Gandhi an'ny siansa Indiana.
Ny avonavonan'i Abdul Kalam amin'ny balafomanga miaramila ao Tipu Sultan dia naseho tao amin'ny NASA
Ankoatra ny hafanam-pony amin'ny sidina, Abdul Kalam dia nitazona hafanam-po mahery vaika ho an'i India mba hahatonga azy ho ampy ary hampandroso ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny teknolojia indizeny, fa tsy amin'ny teknolojia importés avy any amin'ny tontolo tandrefana. Raha ny marina, ny iray amin'ireo traikefa faran'izay sarobidy indrindra dia avy amin'ny faneken'ny fanjakana tandrefana ny fandraisan'anjaran'ny mpisava lalana an'i India amin'ny sehatry ny teknolojia misimisy.
Ny toerana hanaovana an'io zava-nitranga io dia ny Wallace Flight Facility NASA, ao Maryland. Amin'ny maha-injeniera mpitarika ny programa balafomanga any Inde, i Kalam dia nasain'ny NASA handray anjara amin'ny fandaharam-pampianarana enim-bolana amin'ny teknikam-pitaovana rocket.
Tao amin'ny foiben-toeran'i Wallops, Kalam dia nijery sary hosodoko iray izay nahantona tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny, mampiseho ny sehatra fiadiana izay hanombohan'ny fiaramanidina ho an'ireo tafika miditra. Ny mahagaga, ny miaramila manomboka ny balafomanga dia maingoka avokoa, fa ny tanjon'ny balafomanga kosa dia fotsy hoditra fotsy izay hita fa fanamiana britanika. Nijery akaiky i Kalam ary nahatsapa fa ady teo amin'ny tafika Tipu Sultan sy ny miaramila Anglisy kolonialina tany amin'ny tany indiana ny sary hosodoko.
Tipu Sultan no raisina, miaraka amin'ny rainy, Haider Ali, ho mpisava lalana amin'ny fampandrosoana rocket. Gaga i Kalam fa nomena honohono tany amin'ny tranobe NASA ny Indiana iray, raha nody tany an-trano, ny ankamaroan'ny mpiara-mitory aminy dia nanadino ny momba an'i Tipu Sultan.
Na dia ny Sinoa aza no voalohany namorona ny balafomanga, izay nampiasany ho an'ny tanjona ara-piraisana, dia i Haider Ali sy Tipu Sultan izay neken'ny fampielezana ny balafomanga ho an'ny tanjona miaramila. Ny fanavaozana izay nahatonga ny fiaramanidina ampiasain'i Haider Ali sy Tipu Sultan mahomby kokoa dia ny fampiasana ny fantsom-basy, izay nahafahana ny fanamafisana ny faneriterena lehibe kokoa sy mifanaraka amin'izany, ny halehibe bebe kokoa. Ny sasany amin'ireo fiaramanidina ireo dia afaka manidina 1000 yards.
Ny fototry ny balafomanga dia nisy tavoahangy vy izay lavalava valo ary lava 2-3 metatra. Ny andian-tafika an-dRaketa dia nisy lavaka fantsom-batika efatra metatra lava, na dia niova ho an'ny tanjona manokana sy ny fiantraikany aza izany. Ohatra, ny fiarandalambolon'i Haider Ali dia namoaka hoditra vy metaly izay handefa ny onjam-peo amin'ny fiaramanidina misavovona, izay handoro ny entana eny an-dàlana.
Abdul Kalam dia mankasitraka ny Rockets an'i Tipu Sultan ao amin'ny British Firepower Royal Artillery Museum ao Woolwich
Roa avy amin'ny sambon'i Tipu Sultan izay naseho tao amin'ny Woolwich Royal Artillery Museum Any atsimo atsinanan'i Londres dia manana baomba mandatsa-dranomaso. Abdul Kalam nanao ny dia mankany amin'ity tranombakoka ity dia mijery ireo fiaramanidina ireo.
Noforonin'i Tipu Sultan koa ny taovam-pananahana rocky izay mety handrehitra fiaramanidina maro samihafa. Tombanana fa ny miaramilan'i Tipu Sultan dia nanana brigades 27, izay nantsoina hoe Kushoons. Nisy orinasa mpanamboatra ny jiolahy 200, antsoina hoe Jourks, voatendry ho an'ny brigade tsirairay. Tipu Sultan dia nanoratra boky momba ny miaramila, mitondra ny lohateny Fathul Mujahidin, izay namaritra ny rafitra sy ny asan'ny tafika miaramila.
Hitantsika amin'ny tranga tsy miankina amin'ny fambolena voajanahary, toy ny amin'ny tranga Paul Gauguin | Peter Teekamp ary John Elliotson | Neurosurgeon Norm Shealy, ary ny raharaha momba ny vatana vaovao any Ryerson-Semkiw David Rittenhouse | Carl Sagan ary Alexandra Nechita | Pablo Picasso, ny mahaliana, ny filana sy ny talenta dia afaka manitatra mandritra ny androm-piainany. Tsapanay ankehitriny io tranga io raha ny amin'i Abdul Kalam, satria tamin'ny asako miaraka amin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, ilay mpitarika spiritista egyptiana izay naneho ny fahaizan'ny lalao taloha, dia nanamafy fa Kalam no vovoka indray ny Tipu Sultan.
Ahtun Re dia nanamafy ihany koa fa ny mpanolotsaina lehiben'ny APJ Kalam, Vikram Sarabhai, dia ny fanamboarana ny vovoka indray ao Haider Ali, rain'i Tipu Sultan. Amin'ny maha-ray aman-dreny azy, i Haider Ali sy Tipu Sultan dia nanangana ny firenena indiana an'i Mysore ary mpisolovava ny hetsi-panoherana ara-tafika, raha nanangana ny sehatra indiana sy programa misimisy ny Vikram Sarahai sy ny APJ Abdul Kalam, ary manatsara ny toeran'i India manerana izao tontolo izao firenena. Raha ny marina, ny APJ Kalam dia nahazo ny programa momba ny sehatra iraisam-pirenenan'i India sy ny balafomanga tahaka ny tapakilan'i India ho ao anatin'ny ligin'ny tandroka manerantany. Andao hianatra bebe kokoa momba an'i Haider Ali sy Tipu Sultan, izay nanapaka ny faritra antsoina hoe Mysore nandritra ny fe-potoan'ny 38 taona.
Ny tantaran'i Mysore, Haider Ali ary Tipu Sultan
Mysore dia distrika iray any India atsimo 140 kilometatra miala an'i Bangalore. Haider Ali dia teraka tamin'ny taona 1722. Hafa kely ny loharanom-baovao momba ny taona nahaterahany. Ny rain'i Haider Ali dia i Fateh Mohammad ary izy nanana anadahy, Shabiz, izay lasa miaramila tao amin'ny tafika Mysore. Haider Ali dia nanatevin-daharana ny rahalahiny tamin'ny fampielezan-kevitra ary niavaka tamin'ny asa miaramila. Nasehony koa fa liana amin'ny injeniera miaramila izy, mitsidika ny tafika frantsay ao Pondicherry, izay nankafiziny ny fahaizan'ireo manamboninahitra injeniera frantsay. Haider Ali dia voamarika fa manana «mémoire retente» sy «fidirana an-tsokosoko». (6)
Noho ny fahaizany ara-tafika, tao 1755, Haider Ali dia voatendry ho mpitarika miaramila ao Budikot, ao Mysore. Haider Ali dia nampiseho fahaiza-manao mahomby teo amin'ny fandaminana. Fantany fa ny hery mpanjanaka avy any Angletera sy Frantsa dia namolavola rafi-pitantanana ara-tafika mahomby ary nandamina ny tafika manokana tamin'ny fomba mitovy amin'izany. Haider Ali dia namorona ekipa miaramila mifototra amin'ny fitaovam-piadiana Anglisy sy Frantsay. Farany, napetraka teo ambany baiko ny tafika Mysore tao amin'ny 1757. Raha nandresy ny herin'ny tafika Marhattas i Haider Ali, dia nisy Hindu Maharaja avy ao Mysore, mpanohana an'i Hindu, nanome azy ny lohatenin'i Fateh Bahadur. Haider Ali dia natao ho Minisitry ny Lehiben'ny Mysore ao 1761 ary rehefa maty tao 1766 ny Maharaja, dia nanjary mpitondra an'i Mysore i Haider Ali.
Amin'ity andraikitra ity, Haider Ali dia nanaporofo fa mpitantana lehibe. Voarakitra an-tsoratra fa manana ny «faculté amin'ny fijerena lohahevitra marobe izy miaraka amin'izay, mba hahafahany mandre ny taratasy iray vakiana, mibaiko baiko ary hijerena fampirantiana teatra indray mandeha, nefa tsy variana amin'ireto. asa. " (8) Nandritra ny fotoana nanjakany dia nanatsara ny fotodrafitrasan'i Mysore i Haider Ali, nanamboatra lalana sy zaridaina. Ny fiarovana an'i Bangalore sy Seringapatam izay nanorenan'i Ali. Nandefitra tamin'ny finoana hafa izy. Haider Ali koa dia diplaomatika tamin'ny olona ary marihina fa tsy niteraka fahavalo manokana izy.
Ny ady mysore voalohany
Mampalahelo fa nitohy ny fampielezan-kevitra miaramila na dia tamin'ny vanim-potoana nanjakan'i Ali aza. Ny ady Mysore voalohany dia natomboka tamin'ny 1767 rehefa nifanaraka tamin'ny Marhattas, izay nifehy ny avaratra sy afovoan'i India, ary ny Nizam ao Hyderabad ny anglisy. Nizam no anaran'ny mpanapaka tarana-mpanjaka iray, izay nitazona an'i Hyderbad ho renivohiny. Haider Ali no nifehy ny faritanin'i Madras sy atsimon'i India. Na eo aza io firaisana io izay an'ny anglisy, ny Marahattas ary ny Nizam, Haider Ali dia naharesy ny tafika notarihin'i Angletera. Tamin'ny fifanarahana fandriam-pahalemana taorian'izay dia notakiana ny hanampy an'i Haider Ali ny Anglisy raha notafihan'ny hery hafa i Mysore.
Ny Rockys Mysore avy amin'ny Haider Ali sy ny fanampian'i Tipu Sultan dia nahazo ny ady faharoa Mysore
Rehefa nanafika indray an'i Mysore tao amin'ny 1771 indray ny Marhattas, nibitsika ny Anglisy ny fampanantenany ary tsy nety nanampy an'i Haider Ali. Izany dia nahatonga an'i Ali hiombonantoka tamin'ny frantsay. Nanomboka tao amin'ny 1780 ny ady Mysore faharoa rehefa nikasa hanafika tafika Frantsay tany amin'ny faritra ny British ary ny Haider Ali dia tsy nety hanampy ny Anglisy. Nanao fifanarahana indray ny Anglisy niaraka tamin'ny Marhattas sy Nizam avy ao Hyderbad ary nanambara ady tamin'i Haider Ali sy Mysore. Tao amin'ny Ady faharoa Anglo-Mysore, tao amin'ny Battle of Pollilur (10 1780, XNUMX), Haider Ali sy Tipu Sultan dia nandresy fandresena lehibe. Ny antony iray nanampy azy ireo tamin'ny fandresena dia ny iray tamin'ireo kitapo britanika britanika no nodoran'ny Rakikirin'i Mysorean.
Ny fahafatesan'i Haider Ali
Haider Ali nitarika ny lehilahy sy ny 80,000 100 tamin'ny fanafihana ary tamin'ny 1780 tamin'ny Oktobra, nandresy fandresena izy tamin'ny fisamborana an'i Arcot. Tao 1781 anefa, resy teo akaikin'i Madras izy. Voalaza fa niparitaka be ny Haider Ali, izay nitarika ny fahafatesany tao amin'io toby io teo ivelan'i Chittur, ny volana 7 1172 tamin'ny volana desambra. Rehefa naharay vaovao momba ny nahafatesan'ny rainy izy, dia nanao fihetsiketsehana tao amin'ny tafika Mysore i Tipu Sultan ka nandeha tany Chittur niaraka tamin'ireo miaramilan'ny 90,000.
Tipu Sultan avy eo dia nifindra tany amin'ny toeram-piarovana Britanika tao Port de Mangalore ary niaraka tamin'ny fanampian'ny injeniera frantsay, dia nanomboka nanao fahirano. Ny ady anefa dia nifanandrify tamin'ny fotoana nahatongavan'ny Britanika sy Frantsay, taorian'ny Ady Revolisionera Amerikanina. Ireo injeniera Frantsay izay nanampy an'i Tipu Sultan dia voatery nisintona ny fanampian'izy ireo. Tipu Sultan, izay tezitra tamin'ny fanesorana ny Frantsay, dia voatery niova fo ho fanakanana ny fahirano. Tipu dia nanamafy ny fandresena ny British tamin'ny 1783, nandresy ny ady Mysore faharoa. Tamin'ny alalàn'ny fifanarahana natao tamin'ny volana Janoary 1784, dia nipoitra be ny faritanin'i Tipu Sultan ankehitriny.
Ny politikan'ny Tipu Sultan
Andeha hodinihintsika ny fiainan'i Tipu Sultan. Teraka tamin'ny Desambra 10, 1750 tao Devanhalli izy. Tipu dia nampiofana ho mpitarika miaramila avy amin'ny taonan'ny taonany ary nanomboka tamin'ny taona 15 izy, hiaraka amin'ny rainy, Haider Ali, amin'ny fampielezan-kevitra miaramila. Tipu Sultan dia tia nianatra ary nanana tranom-boky 2000. Tipu manokana no nianatra matematika sy siansa. Nolazaina fa tena mavitrika izy.
Taorian'ny nahafatesan-drainy dia nifehy an'i Mysore i Tipu Sultan ary heverina ho mpitondra mahay sy manazava izy. Niasa tamim-pahavitrihana izy mba hampandrosoana ny fahasalaman'ny vahoakany. Ohatra, hampiroboroboana ny fambolena, Tipu Sultan dia nanamboatra tohodrano sy toeram-pivoahana ho an'ny fambolena rano, ary koa ny làlam-pitaterana entana ho an'ny tsena. Tipu Sultan no namorona orinasam-pambolena, naorina tao Cutch, Masquat, ary Jedda. Namporisihany ny varotra tamin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina, toa an'i Oman, Persia ary Torkia. Tipu nanorina trano sy tranobe. Silamo iray, Tipu dia nandrara ny zava-pisotro tao Mysore, saingy nanasitrana ny lohahevitra tsy silamo izy. Nanasa vahiny izy mba hanamboatra orinasa hamokatra glasy, fitaratra ary tranobe. Izy dia nikasa ny hampanjaka ny fanjakany ho fanjakana matanjaka indrindra ao India. Tipu Sultan koa dia nitady vaovao momba ny fivoaran'ny siansa farany indrindra manerantany.
Tipu Sultan dia mpanohana lehibe ny fahaleovantenan'ny fireneny avy amin'ny hery kolonista sy tamin'ity hazavana ity, niahiahy ny tetikasan'ny orinasa Britanika India India hampivelatra ny heriny manerana an'i India. Mba hanamafisana ny toerany amin'ny British, Tipu dia nanao fifanarahana tamin'ny Frantsay, Sultan ao Torkia ary ny Amir of Afghanistan. Tao 1787, i Tipu aza dia nandefa delegasiona nankany Paris, izay nihaona tamin'i Louis XVI, mba hanamafisana ny fiarahany amin'ny frantsay.
Ny Ady fahatelo Mysore sy ny fanafihan'ny Tompo Cornwallis avy amin'ny Rocketmen of Tipu Sultan | Abdul Kalam, araka ny nambara tao amin'ny NASA Wallops Flight Facility
Ny britanika, nahafantatra ny fitomboan'ny herin'i Tipu Sultan, taorian'ny nananganana ny fifanarahana tamin'ny Nizam avy ao Hyperabad sy Marhattas, dia nanomboka ny Ady telo Mysore tao 1790. Tamin'ny volana janoary 1791, dia nandray ny baikon'ny miaramila Anglisy tao Vellore i Lord Cornwallis, tapa-kevitra ny hanao ny fanaovana fahirano an'i Bangalore. Rehefa nifindra tamin'ny lalan'ny Mugli i Cornwallis, dia notafihan'ny miaramila rocky Tipu Sultan izy ireo. (8)
Amin'ny fisaintsainana, angamba ny sary hosodoko naseho tao amin'ny toeram-ponenan'ny NASA Wallops Flight Facility, izay nanome an'i Abdul Kalam fahatsapana fanamafisana, dia nanohina ny fahatsiarovan-tena tsy mahatsiaro na fantatra tany Kalam, fa ady iray izay nentiny indray mandeha. Raha ny APJ Kalam no fananganana indray ny Tipu Sultan, tao Wallops, dia nahazo ny fankasitrahany ny anjara birikiny ho an'ny teknolojia rocket, natao tamin'ny 200 taona lasa izay.
Tamin'ny farany anefa, resin'ny Tipu Sultan tao amin'ny Ady Mysore fahatelo. Tamin'ny fifanekena natao tao Seringapatam, ny renivohiny, tamin'ny mars 22, 1792, Tipu Sultan dia tsy maintsy nandao ny antsasaky ny fanjakany ary nandoa onitra tamin'ireo Britanika sy ireo mpiara-dia aminy roapolo tapitrisa 33.
Ny Adin'ny Mysore fahefatra sy ny fahafatesan'i Tipu Sultan
Taorian'ny fahareseny tao 1792, nanangana ny tafika niaraka tamin'ny fanampian'ny Frantsay i Tipu Sultan. Ny Britanika dia nihevitra fa fandikana ny fifanarahana tany Seringapatam, izay nitarika ny fanafihany an'i Mysore tao amin'ny 1798, izay nanamarika ny fanombohan'ny Ady Mysore faha efatra. Tipu dia tratra tao an-drenivohitra renivohitra, Seringapatam. Indray mandeha indray, ny tafik'i Tipu Sultan dia nandray anjara tamin'ny ady. Niezaka nandositra i Tipu tamin'ny fitsangantsanganana tamin'ny ady teo amin'ny zana-tsipika, saingy naka basy nitifitra ny nono. Nanisy ratra faharoa teo amin'ny ilany havanana izy raha nianjera avy eo an-dohany ny soavaly.
Nosamborin'ny mpiasan'i Tipu Sultan izy ary niangavy azy hitolo-batana amin'ny manampahefana britanika, nahafantatra fa ho voavonjy izy. Tsy nanaiky i Tipu Sultan. Iray miaramila britanika iray no nanandrana naka ny peratra tarehin'i Tipu izay voahodidina sabatra. Tipu, na dia naratra aza izy, dia namely ny sabany ary nasiany fery teo amin'ny lohalin'ny miaramila. Ho valifaty, nanala ny mozikany ny miaramila britanika ary nitifitra an'i Tipu Sultan teo amin'ny lohany, izay nahatonga fahafatesana tampoka. Izany dia nitranga tamin'ny volana 1799. Tipu Sultan taty aoriana dia nipoitra tao amin'ny "Gumbaz", tranombakoka iray izay naoriny, izay nipetrahany tamin'i Haider Ali sy i Fatima Begum reniny.
Tipu Sultan's Rocketmen Reincarnate any Alemana sy ny Vikram Sarabhai Space Center
Ao anatin'ny fotoana fohy, dia ho hitantsika ny fomba nitohizan'ny toetra amam-panahin'ny Vikram Sarabai sy ny APJ Abdul Kalam. Voalohany, te-hanamarina aho fa navaozina ihany koa ny fifandraisana karmic tamin'ny vanim-potoana amin'izao vanimpotoana izao ary maro amin'ireo injeniera sy mpahay siansa izay niara-niasa tamin'ny teknolojia misahana ny balafomanga i Sarabai sy Kalam dia niaraka tamin'izy ireo tamin'ny andron'i Haider Ali sy Tipu Sultan , araka ny voalazan'ny tari-dalan'i Kevin Ryerson, Ahtun Re.
Ohatra, heverina fa ny mpitondra Haider Ali Muhamed Sadik dia niorina indray tamin'ny hoe Brahm Prakash, Tale voalohany ao amin'ny Space Space Vikram Sarabhai. Na i Wernher von Braun, mpahay siansa lehibe, dia niaraka tamin'i Tipu Sultan, angamba tao amin'ny biraon'ny mpitantana an'i Sultan, Burhan-ud-din. Ny famoahana avy amin'ny Space Space Vikram Sarabhai dia omena amin'ny sary eo ankavanana.
Andeha isika handinika ny toetran'ny toetran'i Vikram Sarabhai sy Haider Ali.
Karazana toetran'ny olona nasehon'i Haider Ali sy Vikram Sarabhai
Akanjo lava - Haider Ali dia tia akanjo lava mamiratra, tahaka an'i Vikram Sarabhai, izay nanao akanjo miloko marevaka.
Talenta momba ny fitantanana-Araka ny voalaza tetsy ambony, dia nanana fahatsiarovana mahery vaika i Haider Ali ary mitazona ny fiheverana. Azony atao ny manamboatra mora foana amin'ny fanatanterahana ireo andraikitra takiana amin'ny fitantanana ny sehatra. Vikram Sarabhai koa dia mpitantana ny talenta, izay tsy vitan'ny fandaharana fandaharan'asan'i Indah i India ihany, fa koa ny fitantanana ny orinasam-pambolena sy fiompiana, orinasa, ary ny orinasa. Tahaka an'i Haider Ali, matetika i Vikram Sarabhai no nitazona tambajotram-pihariana maro, fitantanana ny orinasa indostrialy, ary ny fikarakarana ny mpianatra tamin'izany fotoana izany.
Fahatokiana-Haider Ali dia mpitari-tafika miaramila be mpitsidika, mitady fahafahana amin'ny fomba famoronana. Abdul Kalam dia nanamarika ihany koa fa nanamarika i Vikram Sarabhai, mpikaroka tsy mahazatra, indraindray izay nahomby tamin'ny fandaharan'asan'ny habaka India izay tsy ampy vola sy mpiasa.
Ny fitaovan'ny miaramila an-tapitrisany noforonina -Hider Ali dia nitatitra mba handikana fitaovana miaramila frantsay sy anglisy. Vikram Sarabhai dia nahazo fiaramanidina RATO Rosiana, izay nampiasaina mba hanampy ny fiaramanidina amin'ny fanalàm-baraka, izay nampiasaina tamin'ny injeniera motera Indiana RATO. Nandray anjara tamin'io ezaka io i Abdul Kalam.
Accessible-Haider Ali dia nolazaina fa “azon'ny rehetra idirana sy efa nifampiresaka tamim-pahavonona.” (9) Vikram Sarabhai dia notaterina ihany koa fa mijery ny olon-drehetra dia mitovy. Voamarika fa na ny mpanompo aza dia afaka manatona azy malalaka sy miresaka aminy amin'ny fomba malalaka.
Karazam-pitiavana nozarain'i Tipu Sultan sy APJ Abdul Kalam
Fahazarana tsotra: Nihinana sakafo mahazatra i Tipu Sultan ary natory tamin'ny lamba maloto. Abdul Kalam dia nitazona sehatra tsotra ary tsy nanaiky handray ny toerana azo antoka kokoa noho ny teo aloha, rehefa nanolotra azy, toy ny fony izy nitarika ny ekipa Satellite Launch Vehicle 3 tao Thumba.
Ny fitafiana Causal Dress-Tipu Sultan dia nampiavaka ny fitafiana tsotra, mifanohitra amin'ny rainy, izay tia akanjo lava. Abdul Kalam dia nisafidy foana ny akanjo fitondra ary raha nasaina hanatrika ny Prime Minster Indira Gandhi taorian'ny fanombohana voalohany ny fampisehoana an-tsarimihetsika Indiana Satelita iray, dia nanao akanjo sy akanjo tsy maotina izy nandritra ny fivoriana.
Ny fitsabahana - Tipu Sultan dia niaro ny fisotroana fisotroan-dronono, ho an'ny tenany sy ny sehatra misy azy. Nolazaina fa tsy voan'ny vehivavy ny Tipu Sultan. Abdul Kalam nisotro toaka, dia zavamaniry ary nampihinana ny sakaizany.
Poety-Tipu Sultan dia fantatra ho poety mendrika. Abdul Kalam dia tia manoratra tononkalo ary hita ao amin'ny biography ny andininy, Wings of Fire. Abdul Kalam dia namoaka boky poezia mitondra ny lohateny hoe: Ny diako sy ny fiainana.
Ireo mpahay siansa ara-panahy-Tipu Sultan dia tia boky ara-pivavahana, nefa koa liana tokoa tamin'ny fikarohana sy ny zava-baovao farany indrindra. Abdul Kalam dia manam-pahaizana amin'ny soratra masina maromaro ary mbola mahafantatra ny filozofa lozisiela Rudolf Steiner, izay malaza amin'ny fiarovana ny fampandrosoana ny siansa ara-panahy
Innovation-Tipu Sultan dia fantatra amin'ny hoe "hatezerana" amin'ny fanavaozana. Tipu dia namorona fepetra vaovao, kalandrie vaovao, vola ary boky momba ny raharaha miaramila. Noforonin'i Tipu trano fitahirizana tantsaha ary tao anatin'ity tetikasa ity dia namolavola solika tsy miangona vaovao ho an'ny sambo izy. Abdul Kalam dia naneho fahalianana ihany koa amin'ny siansa matematika ary niaiky ny fisian'ny composite, izay azo raisina ho toy ny fihodinana amin'ny fitomboka. Ny parallèle voafaritra manokana dia tafiditra ao amin'ny fivoaran'ny taolam-paty Tipu Sultan izay mety handrehitra fiaramanidina maro samihafa. Ao amin'ny bokiny, Toe-tsaina, Nanamarika i Abdul Kalam tamin'ny avonavona fa i India dia namorona fiaramanidina fandefasana barika marobe antsoina hoe Pinaka. Tahaka an'i Tipu Sultan, Abdul Kalam dia fantatry ny mpamorona.
Matetika i Daring-Tipu Sultan no nilaza hoe: "Aleo miaina toy ny liona iray indray andro any, toy ny ondry iray." Abdul Kalam dia nanambara hoe, "Tiako ny tebitebin'ny fahasahiranana sy ny fikirizan'ny fahalavorariana."
Asa sarotra - Nolazaina fa ny Tipu Sultan dia niasa hatramin'ny maraina ka hatramin'ny misasakalina mba hahasoa ny vahoakany. Abdul Kalam dia fantatra amin'ny hoe miasa ora 18 ora ary asa adolantsento.
Ny fanoloran-tena ho an'ny fampandrosoana ny firenena-Tipu Sultan dia niasa tsy nisy ezaka mba hampandroso ny fanjakany amin'ny lafiny fandrosoana ara-teknolojia sy fampandrosoana ara-toekarena. Tonga mihitsy aza izy niantso ny tenany hoe, "Citizen Tipu Sultan", mba haneho ny fahatsiarovan-tenany ara-tsosialy. Abdul Kalam dia niezaka ihany koa nanao an'i India ho firenena mandroso sy manankarena ary firenena matanjaka, araka ny voasoritra ao amin'ny bokiny, India 2020, Fahitana ho an'ny Taonarivo Vaovao.
Ny avonavona ny fahatanterahan'ny indizeny sy ny fahaleovan-tenany-Tipu Sultan dia naneho ny fankasitrahany ny Britanika tany India ary niezaka nanosika ny orinasa Britanika sy ny orinasa Indiana Indianina avy any amin'ny faritra. Tipu dia nanao fifanarahana tamin'i Frantsa tamin'io ezaka io, na dia diso fanantenana tamin'ny Frantsay aza izy rehefa nisintona ny ady rehefa nanao sonia fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana tamin'i Grande Bretagne. Abdul Kalam dia mpanohana mahery vaika ny famokarana ny teknolojia sy ny vokatra ilaina, amin'ny ankapobeny noho ny fahatakaran'i Kalam fa ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia ivelany sy ny vokatra dia mahatonga an'i India ho mora vidy. Kalam, tamin'ny lafiny, dia nandray anjara tamin'ny tetikasa balafomanga niaraka tamin'ny frantsay izay niafara tamin'ny fotoana, nitovitovy tampoka ny Frantsay tampoka. Tahaka ny hoe nentin'i Abdul Kalam niaraka taminy ny zavatra niainan'i Tipu Sultan, izay nitarika ny fisisihan-dry India ho tsy miankina, tsy politika fotsiny, fa teknolojia ihany.
Ny Affinity an'ny Abdul Kalam ho an'ny Tipu Sultan
Mazava ho azy fa ny toetra izay nozarain'i Tipu Sultan sy Abdul Kalam, izay tena mahavariana indrindra, dia ny fahatsapany miaraka amin'ny rock rock. Araka ny voambolana ao amin'ny Wallops, APJ Abul Kalam dia naneho fahalianana lehibe tamin'ny Tipu Sultan. Tamin'ny fitsidihana vao haingana tany Bangalore tao amin'ny 1991, naneho ny faniriana hitsidika ny fitsarana Tipu Sultan ao Srirangapatna i Kalam. Notsikera ihany koa fa nilaza i Kalam tamim-pahamendrehana fa ny lova navelan'i Tipu Sultan ho mpamaky ny rocket dia tena adino, na dia ao amin'ny faritra misy an'i Tipu Sultan aza, na dia Toro-dalan'i Tipu Sultan Shaheed Memorial dia mihazona tsy tapaka any Bangalore. Abdul Kalam, araka ny tokony ho izy, no mpandahateny tamin'ity forum ity tamin'ny Novambra 30, 1991.
Kalam dia nitsidika ny Firewower Woolridge: Museum Artillery Royal tany akaikin'i Londres ary nitantara fa faly ery rehefa nahita ny fiaramanidin'i Tipu. Ao amin'io hazavana io, ny raharaha Tipu Sultan | Abdul Kalam dia tena "raharaha momba ny fiaraha-monina", izay ahafahan'ny olona manintona ny fiainany manokana. Ny tranga hafa momba ny fiaraha-monina dia ahitana ny raharaha momba ny vatana vaovao Dorothy Dandridge | Halle Berry ary Laurel & Hardy | Bacher Boys.
Raha raisina ireo tranga ireo, dia asehony ireto zavatra manaraka ireto:
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Na dia voafetra ihany aza ny sarin'ireo Ali Haider sy Tipu Sultan, dia mety hankasitraka ny fitoviana misy eo amin'ny endrika ivelany.
Ny fiainana taloha talenta: Araka ny voalaza tetsy ambony, ny talenta dia voaverina amin'ny raharaha Ali Haider | Vikram Sarabhai sy Tipu Sultan | Abdul Kalam, ary koa amin'ny tranga vao teraka ao amin'ny vatana vaovao ao Muhamed Sadik | Brahm Prakash sy Burhan-ud-din | Wernher von Braun
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Niverina indray i Dada sy ialahy, Ali Haider sy Tipu Sultan ho mpanolo-tsaina sy fiarovana, Vikram Sarabhai sy Abdul Kalmam. Ankoatra izany, heverina fa ireo olon-dratsy hafa avy ao Mysore, Muhamed Sadik ary Burhan-ud-din, dia navaozina ho ny mpahay siansa amin'izao fotoana izao, Brahm Prakash sy Wernher Von Braun.
Fiovan'ny Fivavahana, Nationality na Fiaraha-monina Ethique avy amin'ny Fahatongavana ho nofo iray hafa: Ali Haider dia Silamo, fa Vikram Sarabhai kosa dia an'ny fivavahana Jain. Ahtun Re dia nanondro fa i Wernher von Braun, izay Alemanina ary teraka tao amin'ny fivavahan'ny Loterana Kristiana, dia tafiditra tao amin'ny programa rocket an'i Tipu Sultan tamin'ny lasa, izay mety ho nahatonga azy ho Silamo avy tany Mysore.
Affiner Affinity: Abdul Kalam dia nanintona ny fiainany taloha, ary nahafaly azy aza ny fitsidihany ny Woolwich Firepower: Royal Artillery Museum London, izay nankafiziny ireo balafom-pirenenan'i Tipu Sultan, izay naseho. Nirehareha ihany koa izy nahita ny sary hosodoko an'ny rocketmen an'i Tipu niady tamin'ny anglisy, izay nahantona tao amin'ny Wallops Flight NASA's NASA, any Maryland. Kalam dia naniry ny hitsidika ny fitsarana Tipu Sultan ary naneho ny alahelony fa hadinon'ny ankamaroany i Tipu. Tipu dia nanao injeniera ny taova missle iray izay nitifitra balafomanga marobe tamin'ny fotoana iray, izay novolavolain'i India tamin'ny vanim-potoana ankehitriny koa, zava-bita iray izay reharehan'i Abdul Kalam.